Assistant Inventory | IKON Trading Co.,Ltd ﻿
•	ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း၊ အရေအတွက်၊ အရည်အသွေး စသည်တို့ကို စစ်ဆေးလုပ်ဆောင်ရန်။
•	Customer တောင်းဆိုထားသော ပေးပို့ရမည့် ကုန်ပစ္စည်းများအား စာရင်းနှင့်အတူ အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီး
•	Savvy Packing List ပါ အကြောင်းအရာများအား ဖြည့်စွက်၍ ပေးပို့ရမည်။
•	Customer ၏ အဝင်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပေးပို့လာသော အဝင်စာရင်းနှင့်အတူ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ အမျိုးအစား၊
•	အရေအတွက်၊ အရည်အသွေး စသည်တို့ကို ခွဲခြားစစ်ဆေး လုပ်ဆောင်ရန်။
•	နေ့စဉ် Customer တောင်းဆိုထားသော ပေးပို့ရမည့် စာရင်းအား Inventory Section Heads ၏ ပေးပို့ရမည့် Packing List နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်။
•	လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း ကပ်နှိပ်ခြင်း နှင့် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံအား Opeations Team သို့ ညွှန်ကြားရမည်။
•	Savvy Packing List အား လိုအပ်သည်များကို လုပ်ဆောင်ရန် Customer ဘက်သို့ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
•	Customer ဘက်မှ ပေးပို့လာသောအဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်နှင့် လိုအပ်သောနေရာ၊ အတိုင်းအတာ၊ အလေးချိန် စသည်တို့ကို တွက်ချက်စစ်ဆေးရမည်။
•	Warehouse stock In / Out, FIFO, ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	Age : 25 – 30 years’ old
•	Salary: 200,000 mmk to 250,000 mmk (Negotiable)
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	English စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကျွမ်းကျင်သူ (Beginner) ဖြစ်ရမည်။
•	Warehouse Quality / Quantity Control ပိုင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ် ရှိရပါမည်။
•	စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သတင်းပြန်လည်ပေးပို့ရာတွင် လိုအပ်သောစာရင်းဇယားများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် Excel , PowerPoint, Word, Outlook, Internet, relevant software ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြေပြစ်၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အလုပ်လုပ်ရက် တစ်ပတ်လျှင် ၆ ရက် အလုပ်ဆင်းပေးရပါမည်။ လိုအပ်လျှင် အချိန်ပို ဆင်းပေးရပါမည်။
•	Uniforms, office meals provided.
•	SSB offered by company.
•	Ferries to nearest place provided.
•	Other benefits as per company’s policy.
•	Training for continuous improvement and growth.
Assistant Inventory Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon IKON Trading Co.,Ltd Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Export/Import/Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon